Shir looga hadlayey wada shaqeynta Wasaaradaha Beeraha Dowladda Dhexe iyo Dowlad-goboleedyada oo ka dhacay Muqdisho+Sawirro – Radio Muqdisho
Shir looga hadlayey wada shaqeynta Wasaaradaha Beeraha Dowladda Dhexe iyo Dowlad-goboleedyada oo ka dhacay Muqdisho+Sawirro
Shirkaan oo looga la hadlayay sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen Wasaaradda Beeraha ee dowladda Federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa waxaa kasoo qeyb galay Wasiirka Beeraha ee Xukuumadda Soomaaliya, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda, qaar ka mid ah agaasime waaxeedyada Wasaaradda, Agaasimeyaasha guud ee Wasaaradaha Beeraha ee Dowlad Goboleedyada iyo quburo ku xeel dheer dhanka Beeraha.
Shirkan oo socon doono muddo labo cisho ah ayaa diiradda lagu saari doonaa sidii loo sameyn lahaa qorshe howleed ku aadan dhanka Beeraha si ay wada shaqeyn buuxdo u dhexmarto Wasaaradda Beeraha ee xukuumadda Federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada.
Dr Xuseen Xaaji Macow oo ah qabiir dhanka beeraha ah isla markaana ah Madaxa Mashruucan ee Midowga Yurub oo ugu horeyn shirka ka hadlay ayaa faah faahin ka bixiyay mashruucan iyo qeybaha uu ka koobnaan doono.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Beeraha Dr Maxamuud Maxamed Maxamuud ayaa sheegay in u jeedada mashruucan loo sameeyay ay tahay sidii loo heli lahaa qorshe mideysan oo looga hortago hay’adaha arimaha beeraha ka shaqeeya.
Wasiirka Wasaaradda Beeraha ee Xukuumadda Soomaaliya Dr Saciid Xuseen Ciid oo furay shirka ayaa sharaxay ahmiyadda uu shirkan u leeyahay bulshada Soomaaliyeed, isagoo tilmaamay in Wasaaraddu ay diyaar u tahay inay wada shaqeyn dhaw la yeelato Wasaaradaha Beeraha ee dowlad Goboleedyada.
Shirkan oo daba socda kulan 28-kii bisha April ay isugu yimaadeen Agaasimeyaasha Guud ee Wasaaradaha Beeraha ee Xukuumadda Federaalka iyo kuwa Maamul Goboleedyada ayaa la filayaa inay ka soo baxaan go’aano wax ku ool ah oo lagu horumarinayo wax soo saarka dhanka beeraha ee dalka.
Taliyaha qeybta 43-aad ee ciidanka xooga dalka oo maanta si rasmi ah ula wareegay xilka+Sawirro